Ibhola leBhola eliQhathakayo Izinto Ezingundoqo Okufuneka Uzazi
Funda iSiseko seBhola leNgcaciso
Iintlobo ezahlukeneyo zeeLag, ukuBalelwa, iiRhwebo kunye neePlaffs
Ibhola lebhola lezemidlalo lidlala umdlalo we-statistics-based apho abadlali bathathisana khona ngokuqulunqa nokulawula abadlali abavela kwiikomiti ze-NFL . Abathathi-nxaxheba baqulunqa iqela labo phambi kwexesha lebhola lebhola kunye nokukhuphisana namaqela amnandi awakhiwe ngabanye.
Ibhola lebhola ngokugqithisa ngokuqhelekileyo kukhuphiswano lwexesha elide, nangona imincintiswano yangeveki ifumene ukuthandwa. Abaphumeleleyo bemidlalo ngabanye bazimisele ngamanqaku ahlanganiswe ngabadlali be-NFL ngokusekelwe ekusebenzeni kwabo kwangempela kwimidlalo ngosuku olufanayo.
Ibhola leqhawe lingabonakalisa imvelaphi yalo ekupheleni kukaWilfred Winkenbach, owayengummeli-shishini wase-Oakland kunye nomlingane wase-Oakland Raiders. Ngexesha le-1962 le-NFL, i-Wikenbach, kunye ne-Raiders Director Relations Relationship Bill Bill kunye ne-Tribune intatheli yeScotty Stirling yavelisa inkqubo eya kuphuhlisa ibhola lebhola lemidlalo. Ukuqulunqwa kwebhola yemidlalo yebhola yenzeke ngo-1963.
Iqhinga lefantasy lidla ngokuba ngamaqela asibhozo, ama-10, 12, 14 okanye ama-16 amafantasy, nganye yenziwe kwaye iqhutywe ngumntu ochaphazelekayo. Umntu ngamnye othatha inxaxheba, owaziwa ngokuba ngumnini, ujika ngokukhetha abadlali kuze kube yilapho zonke iindawo ezizimeleyo zizaliswe. Abanikazi beqela banomthwalo wokukhetha umgca wokuqala kumdlalo ngamnye, ukusayina abadlali abaza kutshintsha nokwenza amashishini ukuba bakhethe ukwenza njalo. Ekupheleni kwenkathi yongoma, ngokuqhelekileyo iiveki zokugqibela zexesha leNFL eliqhelekileyo, umdlalo ogqithiseleyo uya kugqiba iqela lenkundla.
Inani lamagosa afanelekayo kwi-playoffs lizimisele ngaphambi kokuba kuqalwe ixesha.
Kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo zamaqela ahlukeneyo kunye nezindlela zokudlala ezihlukeneyo, umzekelo, isilathisi esisigxina, intengiso, ubugcini, umgcini, umdlali ngamnye okhuselayo, kunye nosindileyo.
Iimpawu eziqhelekileyo zeziqulatho zizona ziqhelanisekayo zezemidlalo zebhola zebhola kwaye ngokubanzi ziqala ngamaqela okhethwa bonke abadlali babo kwisilathisi se-serpentine.
Abanikazi ke bamise umgca wabo ngeveki nganye ngokusekelwe kwinani labadlali kwisithuba ngasinye esivunyelwe yimithetho yomthetho.
Kukho iintlobo ezahlukileyo zeelwimi ezingamanani eziqingqiweyo zebhola yebhola, eyona nto ixhaphakileyo: yintloko entloko kunye namanqaku onke.
Kwiqonga leentloko, iqela lilingana nxamnye neqela ngalinye ngeveki. Iqela elifumana amanqaku amaninzi kwiveki ethile linikezelwa ngokuphumelela ngelixa elinye iqela linikezwa ilahleko. Ekupheleni kwexesha eliqhelekileyo, amaqela afumana amarekhodi afanelekileyo / alahlekileyo afikelela kwii-playoffs ukugqiba isigqibo sokugqibela.
Amanqaku angamaqela angayilandelanga iimpumelelo kunye namalahleko, kunokuba amaqela aqokelele iingongoma ngokuqhubekayo kunye nokuma okumiselwa ngamaqela eqela leqela. Amaqela akha iipalati eziphezulu eziphezulu ekupheleni kwexesha eliqhelekileyo ziya phambili kwiindawo zokubeka.
Iimpawu zoLondolozo lweeNqaba
Njengokuba kusetyenziswe iilwimi eziqhelekileyo, iilwimi ezingasetyenzisiweyo zingasebenzisa nokuba yi-head-to-head or system points points. Ukwahlula kukuba abanini banikwe inani elinqunyiwe lemali ukuza kubathengi ukuba bazalise uluhlu lwabo. Umnini ngamnye angabhalela kunoma yimuphi umdlali ayithandayo, kwaye abadlali ngabanye bangagqibela kwiqela elinye. Kodwa ukuba umnini-mali uchitha ngaphezulu umdlali omnye, inxalenye yakhe yonke inokuthi ihlupheke ngenxa yokuba engenayo imali eyaneleyo yokugcina ezinye izithuba kunye nabadlali bekhwalithi.
Iintetho zamaDynasty zingumnikazi webhola lomdlalo webhola kwaye zifuna ukuzibophelela kumaxesha amaninzi. Emva koqulunqo lokuqala kwixesha lokuqalisa, iqela lihlala elineqela elifanayo ukusuka kwinye ixesha ukuya kutsho ngaphandle kokuba kuthengiswa okanye kukhutshwa. Unyaka ngamnye emva kwexesha lokuqala, iqulunqo lugcinwe kwii-cookies kuphela, ngokokuba abanikazi befantasy kufuneka babe ngakumbi kwi-talente ekolishile kunomnini kwinqanaba eliqulunqweyo eliqhelekileyo. Olu hlobo lweqhinga lebhola lebhola le-football livumela abanikazi ukuba bafumane amava okufumana i-franchise njengoko kufuneka bathatyathele indlela umthengi ngamnye ochaphazela ngayo ikamva labo.
Iligi le-keeper lihlobo lokudibanisa phakathi kwelifa eliqulunqweyo eliqhelekileyo kunye nelifa lenkosi. Ngamanye amabhondi, ininzi yabadlali bayayilwa, nangona kunjalo, abanini bavunyelwe ukugcina inani elilindelekileyo labadlali kwiqela labo kunyaka ozayo.
Imithetho emininzi yemigqaliselo ivumela abadlali abancinci kuphela ukuba bagcinwe yiqela ngalinye unyaka nonyaka.
Iimidlalo zoLuntu eziKhuselayo
Olu hlobo lweqonga lebhola lebhola lisebenzisa ibhola elikhuselayo kumntu ngamnye kunokuba yinqanaba elikhuselayo, eliqhelekileyo kwezinye iindidi zeentetho. Abadlali abongezelelweyo kunye nezikhundla ukuzalisa abanini banamalungu e-IDP ukuba benze uphando oluthe baninzi ukuze banqume abadlali abazikhuselayo ukuba baqulunqe kwaye nini.Abadlali abalandelwayo banokuzikhusela ngokukhawuleza, abaxhasi bamagosa kunye nezikhwepha ezikhuselayo kunye nezibalo ezilandelwayo zibandakanya iintambo, iingxowa, i-tapdowns kunye ne-return return yardage.
AmaLungu angapheliyo angasebenzisa nayiphi na uhlobo loyilo, nangona kunjalo, basebenzisa uhlobo oluqhelekileyo okanye lothengiso. Iinkqubo zokufaka amanqaku ziyahluka ngokufanayo, kodwa oko kwenza ukuba iqela elilodwa elilondolozayo kukuba iqela elibeka amanqaku amancinci kwiveki ethile liyakususwa kwixesha elisele. Ngeveki nganye, yonke into engummangali ofuna ukuyenza iyakuphepha ukufumana amanqaku aphantsi kakhulu kuwo onke amaqela kulo mdlalo. Njengoko iiveki ziqhubeka kwaye inani leqela liyancipha, kuba nzima ukwenza oko. Iqela lokugqibela elisele emva kokuba abanye bahlonywe ngumntu osindileyo kunye neqhawe lenqwelanqa.
Iqela labadlali kwiqela lebhola lebhola lebhola lezemidlalo liyahlukahluka kwiligi ukuya kwiligi ngokuqhelekileyo kubadlali aba-15 ukuya kuma-18, ngokubanzi kubandakanya ukuqala kokuqala kunye nebhentshi. Ngoko, oko kuthetha ukuba iqela linokubakho ubuncinci bezithuba zemizuzu , ezintathu zihamba emva , iimbali ezintathu eziphezulu , iziphelo ezimbini eziqinileyo , omnye umkhabi kunye namacandelo amabini okukhusela.
Kwiveki nganye, abanikazi bathumela umgca wokuqala othabatha ingozi, ukudibanisa kunye nabadlali kwiiveki ezihamba phambili. Utshintsho lwendlela yokusebenza luyenziwa ngaphambi kokuqala komdlalo ngamnye apho abadlali abasemthethweni babandakanyeka. Ukuba umnini uyahluleka ukwenza ulungiso kumgca wokuqala, abadlali baya kuhlala befana neveki edlulileyo.
Inani labadlali ekusebenziseni iqela elisebenzayo liyahluka kwiligi ukuya kwiligi. Enye yeendlela eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zabadlali ziquka enye yekota, i-back backs, i-receivers two width, i-end one tight end, omnye umkhabi kunye neyunithi enye yokuzikhusela.
Kukho iintlobo ezininzi kwiinkqubo zokubeka amanqaku, kodwa i-award score marks inqaku lifana neendlela umdlalo webhola oza kunika ngayo amanqaku ayo.
I-touchdown iphumela kwiinqalo ezithandathu zomdlali we-scoring. Ukuba i-touchdown yiphumo lomdlalo ogqithisiweyo , i-quarterback iya kunikwa enye efanayo. Iinjongo zeNkalo zibala njengamaphuzu amathathu kumkhabi. Ezinye iilwimi zinika amaphuzu amaninzi njengoko iinjongo zentsimi zihlala zide. Ngokuqhelekileyo, nayiphi na ididi ezingama-40 kubalwa njengeengongoma ezine nantoni na engaphezulu kweeyadi ezingama-50 zinikezelwa ngamaphuzu amahlanu. Abadlali be-kickers bafumana elinye iphuzu lokwenza ingongoma eyongezelelweyo emva kokuphazamiseka, kwaye umdlali obhala kwiinguqu ezimbini ufumana amanqaku amabini. Ukhuseleko luphumela kwibhonasi yeenjongo ezimbini zokukhusela.
Abadlali abahlaselayo banokuphinda bathathe amaphuzu ngokusekelwe ekufumaneni, ekudlulayo nasekuqhutyeni i-yardage. Enye yeefomula eziqhelekileyo igalelo enye nganye yeeyadi ezili-10, iphuzu elilodwa kwiiyadi ezili-10 ezifumana kunye nenqaku elinye kwiiyari ezingama-25 ezidlula.
Abadlali abahlaselayo banokulahlekelwa ngamaphuzu ngokuphonsa ukukhulelwa (-2) okanye baqhube ibhola (-1).
Ekukhuseleni, amanqaku eqela li sekelwe kumanqaku amaninzi ikomiti elinikezelayo, lidibaniswe namaphuzu ebhonasi kwiingxowa, ukuguqula nokukhupha okukhuselekileyo. Kukho inani leenguqu ekulandeleleni ngokusekelwe kwinani lamaphuzu anikezelweyo. Iingxowa ngokubanzi zongeza enye ngongoma kunye kunye nokuguquka kuyafaneleka amanqaku amabini. Ezinye iilwimi ziquka amaqela akhethekileyo adlale kumanqanaba okukhusela ngelixa abaninzi bengenalo.
Amaqela avunyelwe ukuba bathengise abadlali ngokude nje ukuba le ngxelo ihanjiswe ngaphambi komhla wokugqibela wezohwebo. Amaninzi amanqaku anika inkqubo evumela abanye abanikazi ukuba baqeshwe kakhulu kwiqela elinye liyakuthanda ukunqanda abanikazi beqela ukuba basebenzisane kunye nokwakha elinye iqela eliphezulu.
IiWaiver kunye ne-Free Agency
Naliphi umdlali ohlala ungagqithwanga uhlelwa njengegosa elikhululekile kwaye ungasayinwa yiyiphi na iqela ekufike kuqala, isiseko sokuqala. Nangona kunjalo, ukuba udibaniso lubeka iqela phezu komda wokubala, umnini makasikhululwe omnye wabadlali kwiqela lakhe.
Umdlali okhutshwayo uya kufakwa kwi-awaivers, ngokuqhelekileyo kwisithuba seentsuku ezintathu ukuya kwezine. Kuze kube ngumdlali ogqithiselayo, unokuthiwa nayiphi na elinye iqela kwiligi. Ukuba umdlali ekuxhasweni ufunwa ngamalungu angaphezu kweyodwa ngelixa ixesha lokuyeka liphela, unikezelwa kwikomiti ehleli ephantsi kwiimali ngexesha lokubango.
Umqhudelwano ogqithiseleyo ngokuqhelekileyo ubanjelwe iiveki zokugqibela okanye ezintathu kwixesha eliqhelekileyo leNFL, ngokuxhomekeke kumaphi amaqela asemasimini. Ukulinganisa kunqunywe ngokukodwa njengoko kuqhutywa ngexesha lexesha eliqhelekileyo kunye nomqhubi womncintiswano ohamba phambili ukuya kwinqanaba elilandelayo ngelixa ilahlekile iphela.
Ubungqina bebhola lezemidlalo luqhutyelwa xa iqela elincinci liye lincinci ukuya kumaqela amabini;
I-Hilarious Fantasy Ibhola Amahlaya
IiMidlalo eziPhambili zeMatriki yeeKompyuta
Iingcipheko zoLutsha lweBhola
Iimbono zeMicrosoft for Fantasy Baseball League Names
Ukudlala njani ukhuseleko kwiBhola
Unyaka Ngonyaka we-NFL Franchise Genealogy
Uvavanye i-Super Bowl I-Trivia Ulwazi kunye nale mibuzo
Iindlela ezi-5 zokukhanga umntu waseVirgo
Imbali Yendalo yeGalapagos Islands
Kubaluleka kweNgqungquthela yoMgaqo-siseko wase-US
IYunivesithi yaseWisconsin-Madison Admissions
Umntu wesono, i-Venial Sin, i-Confession, kunye nokuDlelana
Indlela yokuvavanya i-Baking powder kunye ne-Baking Soda
Imizekeliso, iMifanekiso, iifoto zePantheon eRoma
Imfundo yabantombazana e-Islam
Indlela yokubhala i-Homeschooling Philosophy Statement
I-Bon Jovi Iingoma zee-80s